विश्वमै शेयर बजारमा अल्पकालिन लगानीकर्ता, शेयर बजार किन टिकाउ छैन ? यस्तो छ कारण :: BIZMANDU
विश्वमै शेयर बजारमा अल्पकालिन लगानीकर्ता, शेयर बजार किन टिकाउ छैन ? यस्तो छ कारण
-लिउ चेनमिन/ रासस,प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
प्रकाशित मिति: May 16, 2018 3:06 PM
न्युयोर्क। सन् २०१५ मा संयूक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रको एक भेलाले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि दीगो विकास लक्ष्यका लागि विभिन्न १७ आधार स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
गरीबी निवारण, भोकमरीको अन्त्य, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि समस्याको सामना, मजबुत संरचनाको निर्माण र समावेशी तथा दीगो आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका उद्देश्य प्राप्त गर्न दीगोे विकासका लागि लगानी अपरिहार्य शर्त हो । प्रतिवद्धता भएको तीनवर्ष भइसक्दा पनि दीगोे विकासका लागि हाम्रो वित्तीय प्रणालीलाई लाभ हुने प्रशस्त आधार तय हुनसकेका छैनन् ।
झण्डै ६० अन्तरराष्ट्रिय निकाय र संघसंस्थाको समन्वयमा राष्ट्रसंघले हालै लगानी, नीति र दीगोे विकास लक्ष्यका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । यसले दीगो लगानीका लागि सकारात्मक गति त सिर्जना गरेको छ, तर जतिवेलासम्म समग्र वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन लगानीकोक्षितिजसम्म पुर्याउन सकिदैन वा दीगो विकासलाई सबैको चासोको विषय बनाउन सकिदैन लक्ष्य प्राप्त त्यतिवेलासम्म सम्भव हुँदैन ।दीर्घकालीन अवधारणाविना खासगरी जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका निश्चित जोखिममा निजी लगानीका निर्णयले आकर्षण पाउन सक्दैनन् ।
विश्वव्यापी वित्तीय प्रवाह व्यापक छन् तरपनि लगानीको स्तरले महत्व राख्छ । आजभोलि अल्पकालीन लगानीको ढाँचाले पूँजी बजारलाई डोयाएको छ र विनिमय दर अस्थिर छ । यसले खासगरी विकासशील राष्ट्रका लागि स्वभाविकरूपमा दीर्घ लगानीको मूल्यलाई बढाइदिएको छ र जोखिममा पारेको छ ।
यदि हामीले विकासका दीर्घकालीन योजना पुलपुलेसा, सडक, खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थामा लगानीलाई आकर्षित गयौँ भने यसबाट विकास र स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छौँ । यी लगानी योजना बढीभन्दा बढी वातावरणीय तथा सामाजिकरूपमा दीगो हुनुपर्छ । खासगरी उर्जा प्रणालीमा भएको आजको लगानीले विकासको लक्ष्यलाई आगामी केही दशकसम्म अवरुद्ध पार्नेछ । लगानीलाई आकर्षण गर्नका लागि अहिले वा भविष्यमा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रयासमा वेवास्ता गर्नहुँदैन । यसबाहेक सबै आर्थिक नीतिका साथमा लैङ्गिक समानताका मुद्दा पनि विशेष चासोको विषय बन्नु आवश्यक छ ।
लगानी कर्तालाई अल्पकालीनबाट दीर्घकालीन सोचमा लानु आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्वशर्त हो । तर निजी क्षेत्रले यो सङ्क्रमणको जोखिम आफैँले लिदैन । नीतिनिर्माताले यसको अगुवाई गरिदिनुपर्छ । सरकारले दवावमुलक नियमलाई कार्यान्वयन नगरेसम्म बजारले स्वतस्फुर्तरूपमा निष्पक्ष तथा सार्वजनिक हितमा काम गर्दैन । सार्वजनिक लगानीसँगसँगै यो राज्यको एउटा महत्वपूर्ण एवम् जिम्मेवार काम हो ।विशेषगरी विश्व अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न विवेकी नियमकानून, पूँजीको आवश्यकता, कम्पनी वा फर्मको लगानीमैत्री संस्कृति र प्रबन्धगत मुआब्जाका लागि नयाँ, सही तथा दीर्घकालीन मापदण्डको आवश्यकता रहनेछ ।
दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तगर्न निर्धारित बाँकी १२ वर्ष विश्वका लागि प्रशस्त समय हो । तर संयुक्त राष्ट्रसंघको विगतका अनुभव हेर्दा निर्णायक कार्यका लागि लक्ष्यउन्मुख पहल थाल्न अब ढिलो गर्नुहुन्न ।विश्वमा अहिले देखिएको भूराजनीतिक तथा व्यापारसम्बन्धि तनावको स्थितिले हामीलाई प्रगतितर्फ अघि बढाउनुको सट्टा अझ नराम्रो अवस्थातिर धकेलिरहेको छ । दीगो विकाश लक्ष्य प्राप्त गर्न र विश्वको सुन्दर भविष्यका लागि यस किसिमका असहमति हुनुहुँदैन ।
समग्रमा भविष्य लगानीको खोजी गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । विभिन्न वित्तीय अवस्थामा रहेका कैयौँ सार्वजनिक र निजी संस्थाले आफूलाई रूपान्तरण गरिरहेका भएपनि समग्र वित्त प्रणालीले अझै दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न थप परिवर्तितरूपमा आउनु जरूरी छ । हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छौँ । अब हामी लक्ष्यअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । (लिउ चेनमिन संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि उपमहासचिव तथा अर्थशास्त्र र सामाजिक मामिला विज्ञ हुन् ।)
विश्वमै शेयर बजारमा अल्पकालिन लगानीकर्ता, शेयर बजार किन टिकाउ छैन ? यस्तो छ कारण को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।